Waa maxay qabow qabow? | Saadaasha Shabakadda
Miyaynu ognahay waxa qabow qabow runti yahay? Hadda, marka ficil ahaan dhammaan Isbaanishku ay la kulmaan xaalad saadaasha hawada ee jiilaalka, waxaa xiiso leh in la ogaado waxa ifafaaladani tahay iyo sida ay u bilaabmayso.
Marka, aan waxbadan ka ogaanno qabowga.
3 Goorma ayaa mawjad qabow loo tixgeliyaa inay saameyn ku yeelanayso Isbayn?
4 Tallaabooyinka ilaalinta
Qabsashada qabow waa a ifafaale kaas oo heerkulka hawadu uu si aad ah hoos ugu dhaco natiijada duulaanka tiro hawo qabow ah. Xaaladani waxay socotaa in kabadan hal maalin waxayna soo gaari kartaa boqolaal ama kumanaan kiilomitir oo laba jibbaaran.
Haa, waxaa jira laba nooc:
Cufnaanta hawo-mareenka (mowjadda cirifka, ama mowjadda qabow ee kalalar): waxay sameysmayaan inta udhaxeysa 55 ilaa 70 darajo oo sare. Waxay kuxirantahay halka ay aadaan, waxay la kulmi doonaan xoogaa isbedel ah ama kuwa kale. Tusaale ahaan, haddii ay u dhaqaaqaan aagagga leh heerkulka diiran, way kululaan doonaan, markay sidaa sameeyaan, waxay noqonayaan kuwo aan xasilloonayn, sidaasna ku doorbida samaynta daruuro roob doon ah oo nooca duufaanka wata; Dhinaca kale, haddii ay aadaan dhanka Badweynta Atlantika iyo Badweynta Baasifigga, hawadu waxaa lagu rari doonaa qoyaan oo markay la kulmaan biyaha cusub, waxaa samaysma bankiyo ceeryaamo ama daruuro roob leh, oo daciif noqon doona.
Cufnaanta hawada ee Arctic iyo Antarctic ama Siberia: waxay asal ahaan ka soo jeedaan meelaha u dhow tiirarka. Waxaa lagu gartaa heerkulka hooseeya, xasilloonida sare, iyo qoyaanka oo hooseeya, waana sababta daruurtu ugu yar tahay. Badanaa ma soo saaraan baraf culus haddii aysan dhaafin Badweynta Atlantik, maxaa yeelay markay sidaas sameeyaan waxay noqdaan kuwo aan degganeyn.
Goorma ayaa mawjad qabow loo tixgeliyaa inay saameyn ku yeelanayso Isbayn?
Isbaanishka soohdimaha soo socda ayaa laga sameeyay:
Heerkulku waa inuu hoos udhaca 6ºC ugu yaraan 24 saacadood. Waxay kuxirantahay aagga, heerkulka ugu yar waa inuu noqdaa mid ama mid kale:
Xeebta jasiiradda, jasiiradaha Balearic, Ceuta iyo Melilla heerkulka ugu yar waa inuu gaadhaa marinka 0ºC.
Meelaha sare ee u dhexeeya heerka badda iyo 200 mitir, heerkulka ugu yar waa inuu gaadhaa marin u dhexeeya 0 iyo -5ºC.
Meelaha dhererkoodu u dhexeeyo 200 ilaa 800 mitir, heerkulka ugu yar waa inuu gaadho marin u dhexeeya -5 iyo -10ºC.
Meelaha dhererkoodu u dhexeeyo 800 iyo 1200 mitir, heerkulka ugu hooseeya waa inuu gaaraa marin ka hooseeya -10ºC.
Meelaha sare, marinnada looma sameynin tan iyo markii dadka loo maleynayo inay la qabsan doonaan, ama haddii kale waxay ku taal aagagga aan dadku ku noolayn.
Si looga fogaado dhibaatooyinka, Aad ayey muhiim u tahay inaad ka ilaaliso naftaada qabowga adoo xiranaya dharka kuleylka, haddii ay suurogal tahayXirashada surwaal, funaanad iyo jaakad ayaa ku filnaan doonta halkii aad gashanaan lahayd qaybo badan oo dhar ah, taas oo laga yaabo inay tahay mid aan raaxo lahayn. Sidoo kale, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo qoorta iyo gacmaha, maadaama haddii kale aan ku dhici karno hargab waqti ka yar inta aan ka fikirno. Haddii aan jiran nahay, waa inaan u tagnaa takhtarka oo aan iska ilaalino inaan bannaanka aadno ilaa aan ka bogsanno.
Haddii ay dhacdo inaad baabuur qaadatid, waa inaad aragto saadaasha hawada iyo sidoo kale inaad ogaato isticmaalka silsiladaha, gaar ahaan haddii ay tahay inaad dhaafto ama aado meelaha barafku ka da’ay.
Waxaan rajeyneynaa in qodobkaan faa iido kuu lahaa 🙂.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Hirar qabow » Waa maxay qabow qabow?